Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ada IMF oo Saadaalisay In Dhaqaalaha Africa Kordhayo 2017.
Hay’ada IMF oo Saadaalisay In Dhaqaalaha Africa Kordhayo 2017.
Posted by ONA Admin	/ November 4, 2017
Hay’adda lacagta aduunka u qaabilsan ee IMF ayaa waxaay sheegtay in sanadkan 2017 ka uu laba jibaarmayo dhaqaalaha wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha, kadib markii sanadkii hore uu kordhay 1.4%.
IMF ayaa saadaalisay sanadka 2018-ka in kororka dhaqaalaha uu gaadhi doono 3.4%, Saddex meelood meel dhaqaalaha wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha ayaa kordhaya 5%. Agaasimaha IMF ee Afrika ayaa sheegay inuusan ka fileyn wadamada kale in kororkooda dhaqaalahooda uu soo gaadho heerkan oo kale.
“Waxaa jiri doonta xaalad 12 ka mid ah 45-ta wadan ee ka hooseeya saxaraha dadka ku nool wadamadaasi aysan arki doonin wax koror ah oo ku yimaada daqligooda, waxaanu ka hadleynaa 40% dadweynaha”ayuu yiri Agaasimaha IMF ee Afrika.
Hay’adda IMF ayaa sidoo kale taabatay walaac isa soo taraya oo dadka ay ka qabaan deymaha guud ee sii kordhaya oo haatan u dhigma 50%, wax soo saarka wadamada ka hooseeya saxaraha. Sidoo kale IMF ayaa sheegtay in wadamadda Afrika ay u baahan yihiin inay ka fikiraan siyaasadooda dhaqaalaha si ay u helaan koror dhaqaale.